युगसम्बाद साप्ताहिक - राजनीतिको नाममा अपराधको खेती
Friday, 02.21.2020, 11:40am (GMT+5.5) Home Contact
Tuesday, 09.27.2016, 11:59am (GMT+5.5)
नेपालको राजनीतिमा अपराधको जालो छ । राजनीतिक दलका शीर्ष तहका नेताहरू ठूला अपराधमा संलग्नहरूको संरक्षणमा लाग्छन् भन्ने प्रमाण धेरैपटक देखिएको छ । चरी–घैंटे प्रकरणमा नेपालको राजनीतिमा अपराधको जालोको सामान्य नमूना हो । राजनीतिको आडमा अवैध असुली गर्ने कामले पनि तीब्रता पाएको छ । यस्तै असुली प्रकरणले गत मंगलबार राजधानीका थुप्रै निजी विद्यालयहरूमा एकाबिहानै बम आतंक मच्चियो । दुई विद्यालयमा पड्क्यो नै । मानवीय क्षति भएन तर विद्यार्थीहरूमा ठूलो त्रास फैलियो । विद्यालय संचालकहरू आक्रोशित भए ।
विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा भएको धेरै भयो । तर, सबैभन्दा धेरै प्रहार विद्यालयमै हुने गरेको छ । राजनीतिक मुद्दा, शैक्षिक मुद्दा, शिक्षकका मुद्दा, विद्यालय संचालकका मुद्दा सबैको तारो विद्यालय नै हो । मुलुकको निजी विद्यालय अझै बढी तारोमा परेको छ । त्यो तारो निजी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढाउन, विद्यार्थीहरूलाई सहुलियत दिन केन्द्रित नभै कुनै सन्काहाको सनका पूरा गर्न चन्दा नदिएको, कसैलाई जागीर थमैती नगरिएको, शिक्षक नियुक्तिमा आफूले भनेको नमानेको मात्रै आधार हुन्छन् ।
महंगो शुल्कसंग गुणस्तरको नाममा घोकन्ते ज्ञान बेचिरहेका निजी विद्यालयहरूले अथाह कमाइरहेका छन् भन्ने जगजाहेर विषय हो । यो उनीहरूको हैन, राज्यको कमजोरीका कारणले हो । सरकारी विद्यालयमा भएको अर्बौंको लगानी सदुपयोग हुन नसक्दा र शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बनाउने होडवाजीले शैक्षिक क्षेत्र विकृतिको चुचुरोमै पुगेको छ । यसको फाइदा निजी क्षेत्रका विद्यालयले उठाइरहेका छन् र यिनै विद्यालयसंग आर्थिक लाभ लिने सोच राजनीतिक दल तथा तिनका भातृ संगठनको हुन्छ ।
बम काण्डको अनुसन्धानबाट खुल्यो त्यो काम गर्ने कुनै राजनीतिक दलको आडमा भएको रहेछ । बम चन्दा संकलनको अभियान हो यसैको दवावका लागि बम राखियो । यो घटनापछि विद्यालय संचालक मात्र हैनन् उद्योगी, व्यवसायीहरू खुरुखुरु चन्दा दिन बाध्य हुन्छन् भन्ने सोचको उपज हो । उग्र मानसिकता प्रदर्शन हो– राजनीतिक दलको नाममा आतंक नै हो ।
मंगलबार बिहानैको तातो खबर थियो विद्यालयहरूमा राखिएको बम । केही स्थानमा पड्कियो र कतिपय स्थानमा सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले निस्क्रिय पार्याे । तर, समस्या अर्को सुरु भयो । बम निस्क्रिय पारियो, आतंक हट्न सकेन । विद्यार्थीहरू कसरी विद्यालय जाने । अब चन्दा दिएर विद्यालय खोले पनि विद्यार्थीहरू पढ्न सक्लान् । चन्दाले बम आतंक हट्ला ? विद्यालयमा बम फाल्नेले यो किन नसोचेको ? विद्यालय संचालकसंग चन्दा माग्नेले विद्यालयमा किन आतंक फैलाउने ?
हुन त विद्यालयहरूमा चन्दा आतंक र भौतिक सम्पत्तिमाथिको तोडफोड यो नै पहिलो हैन । यसको सुरुवात दुई महिना अघिदेखि नै भएको घटनाक्रमले सिद्ध गर्दछ । साउनको पहिलो साता एक विद्यालयका बसमा भएको आगजनीपछि भेटिएको पर्चा र बम राखिएका विद्यालयहरूमा भेटिएको पर्चा एकै छ । यी दुबै पर्चा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी केन्द्र तथा योङ कम्युनिष्ट फोर्स नेपालका नाममा छरिएको छ ।
अघिल्लो मंगलबार उपत्यकाका झण्डै एक दर्जन विद्यालयलाई लक्षित बमसंगै त्यही पुरानै संगठनको पर्चा भेटिएपछि यो लामो रणनीति र अभियानको उपज हो । विद्यालय मात्र हैन यिनै संगठनको नाममा व्यापारीहरूसंग पनि मोटो रकम चन्दा असुली भैरहेको छ । गम्भीर प्रकतिकका घटना नघट्दासम्म यस्ता अभियान सार्वजनिक नहुने गरेकाले मात्र हो ।
आफूहरू लामो समयदेखि उपरोक्त संगठनको चन्दा आतंकमा परेको बताउने एक स्कुल सञ्चालक मंगलबार बम राखिएको घटनालाई चन्दा आतंकसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँछन् । विगतमा यस्ता घटना भएपछि विद्यार्थी संगठनका नाममा चन्दा माग्नेहरू आउने गरेको भन्दै उनले भने, विभिन्न राजनीतिक दलको विद्यार्थी संगठन भन्दै विभिन्न समूह रकम तोकेर नै चन्दा माग्न आउँछन् । र, बार्गेनिङ गरेर एउटा रकम तय हुन्छ ।’ अहिले दशैं नजिक आएकाले पनि विद्यार्थी संगठनको नाममा चन्दा माग्ने समूहहरू स्कुलमा पुग्ने गरेका छन् । मागपत्रका नाममा पैसा उठाउने गिरोह बढी सक्रिय भएको छ ।
त्यसो त यसमा राज्यपक्षको कमजोरी कम्ती छैन । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको नाममा अपराधीलाई आममाफी दिने कार्य गर्दा अपराध मौलाउँदो छ । स्मरणीय के छ भने साउनमा विद्यालय बसमा आगजनी गरेको पक्राउ परेकाहरू राजनीतिक दवावकै कारण कारबाही नगरी सामान्य धरौटीमा छोड्दाको परिणाम अहिले देखिएको प्रहरीको भनाइले मुलुकको राजनीतिक कता जाँदैछ भन्ने देखाउँछ । साउनमा एउटा स्कुल बस जलाएको आरोपमा पक्राउ परेकाहरू नै बम राख्ने घटनामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । यो घटनाले अर्को गम्भीर अवस्थाको उजागर गरेको छ, राजनीतिमा छिरेको अपराधीकरण ।